Toerana 10 ambony fitsidihana fitsidihana any Aostralia | Fitsangatsanganana tanteraka
Fizahan-tany any Aostralia
Ana L. | | Aostralia
I Aostralia dia velaran-tany lehibe voahodidin'ny ranomasina, io no firenena fahenina lehibe indrindra manerantany miaraka amin'ny velarantany 7.686.850 kilometatra toradroa, izay ampianay ny faritry ny nosiny. Ary satria fantatry ny maro fa ny ankamaroan'ny mponina ao aminy dia miorina amin'ny tanàn-dehibe amoron-tsiraka, ary te hahafanta-javatra, ny Confederation of Australia dia mbola monarchie lalàm-panorenana, miaraka amin'ny rafitry ny governemanta parlementera, izay i Queen Elizabeth II no lohan'ny fanjakana Aostraliana ankehitriny ary mampiasa ny anaram-boninahitra ofisialin'ny Queen of Australia.
Raha nanapa-kevitra ianao fa ity faritra eto amin'izao tontolo izao ity no halehanao manaraka, Omeko anao ireo toerana 10 ambony tsy azonao adino amin'ny fitsidihanao hankafy ny fizahantany any Aostralia. Rehefa manao lisitra aho dia holazaiko anao hoe:
Làlan'ny làlambe Ranomasina Lehibe
Ary izao dia mandeha tsirairay isika:
1 Sydney, ilay helodrano manokatra an'i Aostralia
2 Cairns, toerana malaza indrindra
3 Gold Coast, ny morontsiraka tonga lafatra amin'ny fivezivezena
4 Fraser Island, toerana misy lova manerantany
5 Nosy Magnetika, nosy misy fiovana amin'ny kompà
6 Nosy Whitsundays, na ny vatoharan-dranomasina sakana lehibe
7 Ayers Rock, ilay vato misy vahiny
8 Ny làlan'ny ranomasina lehibe
9 Valan-javaboary Kakadu, sary hosodoko taloha indrindra amin'ny zanak'olombelona
10 Tasmania, fizahan-tany fizahan-tany
Sydney, ilay helodrano manokatra an'i Aostralia
Ny helodranon'i Sydney Izy io dia iray amin'ireo tsara tarehy indrindra any Aostralia, ary ny tena vavahady mankany amin'ny firenena. Ny renivohitra no tanàna be mponina indrindra ary naorina tamin'ny 1788.
Ny sasany amin'ireo toerana izay tsy azonao adinoina ao amin'ity tanàna cosmopolitan ity, miaraka amina fiainana an-tany malalaka any afovoan'i Newtown sy Annandale, no opera, ilay sary masina namboarina tamin'ny 1973 izay ahalalantsika ny tanàna, ny lapan'ny tanàna, ny City Recital Hall, ny State Theatre, ny Theatre Royal, ny Sydney Theatre ary ny Wharf Theatre.
Ankoatr'ireo fitsidihana ara-kolontsaina ireo dia manome soso-kevitra ny masoandro mody ambonin'ny Bay Bridge sy ny aquarium-ko aho.
Cairns, toerana malaza indrindra
Na dia tanàna kely aza i Cairns, herintaona dia mandray mpizahatany manodidina ny 2 tapitrisa izy, ary toerana tena tian'ny besinimaro izy io noho ny toetrandro tropikaly sy ny akaikin'ny Great Barrier Reef latsaky ny adiny iray tamin'ny sambo, ny Daintree National Park ary ny Cape of Tribulation, sahabo ho 130 kilometatra.
Ity no toerana voatondro hanombohana fizahan-tany any Aostralia ary atomboka eto ny làlana mankany Cooktown, ny saikinosy Cape York ary ny Atherton Plateau.
Gold Coast, ny morontsiraka tonga lafatra amin'ny fivezivezena
Gold Coast tanàna iray izy io, ary koa ny faritra amoron-dranomasina mahafinaritra sy ireo onja goavambe tonga lafatra amin'ny fivezivezena amin'ny Pasifika. Ny Surfers dia hahafantatra bebe kokoa momba an'io, saingy nilaza izy ireo fa ny Snapper Rocks Superbank, akaikin'i Coolongatta, dia nanana onja avo indrindra eran'izao tontolo izao. Azonao atao ihany koa ny mijanona ao Currumbin, Palm Beach, Burleigh Heads, Nobby Beach, Mermaid Beach ary Broadbeach. Mba hanana onja madio nefa tsy be loatra, ny Sunshine Coast dia atolotra any Caloundra, Moolooloba, Maroochydore, Coolum Beach ary Noosa Heads, izay ahatongavan'ny ala amoron-dranomasina.
Fraser Island, toerana misy lova manerantany
I Fraser Island dia toerana iray vakoka manerantany nanomboka ny taona 1992, ary izy no nosy fasika lehibe indrindra manerantany 1.630 kilometatra toradroa. Ny anarany amin'ny fiteny Aboriginal, K'gari dia midika hoe paradisa, ary araka ny azonao an-tsaina izany. Miaraka amin'ny tontolo iainana manokana, ny fizahan-tany namolavola dia mitahiry ny hatsaran-tarehy sy ny zava-boary isan-karazany ao amin'ny nosy. Raha hitsidika azy ianao dia hanome andian-torolalana ho anao izy ireo rehefa any ianao, toy ny tsy famahanana dingoes. Raha ny marina, ny teny filamatr'ilay nosy dia hoe raha mbola mijanona eo amboniny ianao dia tokony ho tsy dia hita loatra ary tsy hanimba araka izay tratra ny fanatrehanao.
Nosy Magnetika, nosy misy fiovana amin'ny kompà
Ny anarany Magnetic Island dia avy amin'ny oviana Hitan'i James Cook tamin'ny 1770 fa niova ny tondro-sambo rehefa nandalo teo akaiky teo izy, noho ilay nantsoiny hoe "effet magnetika", nanomboka tamin'izay no nohadihadiana ny niandohan'ny hetsika, saingy tsy nisy fanazavana hita. Raha izaho manokana dia heveriko fa ity "effet magnetika" ity dia avy amin'ny morontsiraka 23 sy ny andro azon'ny masoandro 300 isan-taona, iza no tsy mamela ny tenany ho lasa manetsika azy ireo na ny koala? Ary ny antsasaky ny nosy dia nambara ho valan-javaboary, hiarovana ireo biby ireo.
Nosy Whitsundays, na ny vatoharan-dranomasina sakana lehibe
Ny Nosy Whitsunday dia vondrona nosy 74 sisin-tanin'ny Great Barrier Reef, ary ny rano voaro amin'ny ranomasina atsinanana, ny sasany amin'ireny dia fasika amoron-dranomasina tena tsara, tazomin'ny fakan'ny hazo rofia tokana.
Io paradisa tropikaly io no toerana itiavan'ny romantika miaraka amin'ny tolo-kevitra mariazy sy tantely indrindra isaky ny metatra toradroa, ka raha mikasa ny hanao dia miaraka amin'ny namanao ianao dia efa fantatrao izay mifanaraka aminy. Ny aborigines an'ny nosy dia ny Ngaro izay iray amin'ireo antitra indrindra voarakitra ao Aostralia.
Ayers Rock, ilay vato misy vahiny
Ny horonantsary Encounters in the Third Phase (1977) dia nampalaza ity vatolampy ity, ny vato lehibe indrindra eto an-tany, toerana masina an'ny aborigines Aṉangu ary iza no anarany Uluru.
Ny haavon'ny vatolampy dia miakatra 348 metatra ambonin'ny tany, ary 863 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina, na dia ambanin'ny tany aza ny ankamaroany. Ny drafitry ny monolith, izay miova loko arakaraky ny firehitry ny tara-masoandro dia mirefy 9.4 kilometatra. Ireo mponina nentim-paharazana ao amin'ilay faritra dia mandrindra fitsangatsanganana an-tsokosoko momba ny biby, ny zavamaniry eo an-toerana ary ny angano vazimba teratany.
Ny làlan'ny ranomasina lehibe
Ny iray amin'ireo toerana mahazatra hankafizana ny fizahantany any Aostralia dia ny làlan'ny ranomasina lehibe izay tsy tokony hialona an'ireo 66 any Etazonia.
Ny Làlan'ny Ranomasimbe Lehibe dia miainga avy any Melbourne ka hatrany Adelaide manaraka ny morontsiraka atsimo atsinanan'i Aostralia, mandehandeha ny ranomasina sy ireo monolita goavambe. Handalo eo anelanelan'ny riandrano mamaky ny ala maitso ao amin'ny Otway National Park ianao ary ho hitanao aza ny trozona ao Warrnambool, mandalo ny hantsam-bato avy any Cape Bridgewater ... mitandrema, satria handalo tanimboaloboka sy famokarana divay koa ianao miaraka amin'ny divay Aostraliana tsara indrindra. Avelao ny tavoahangy ividiananao rehefa tonga any amin'ny toerana halehanao ianao.
Valan-javaboary Kakadu, sary hosodoko taloha indrindra amin'ny zanak'olombelona
Ny valan-javaboary Cockatoo, any avaratra, tsy afaka mitsidika afa-tsy 100% ianao amin'ny main-tanyManomboka amin'ny Mey ka hatramin'ny septambra, amin'ny vanim-potoana orana dia tsy azo atao ny miditra amin'ny faritra maro. Ny fanitarana azy dia mitovy amin'ny an'ny State of Israel ary inoana fa misy 10% amin'ny tahiry uranium manerantany.
Ny ampahany mahaliana indrindra amin'ny valan-javaboary dia ny lemaka tondra-drano, miaraka amin'ny voay an-dranomasina sy ny voay Johnston, izay matory fatratra mandritra ny andro. Tsara homarihina ihany koa ireo sary hosodoko misy ny lava-bato ao Ubirr, Nourlangie ary Nanguluwur onenan'olona tsy tapaka nandritra ny 20.000 XNUMX taona mahery.
Tasmania, fizahan-tany fizahan-tany
Tasmania dia fanjakan'i Aostralia, misy ny nosy Tasmania iray manontolo sy ireo nosy kely mifanila aminy. Ity faritra ity dia manankarena amin'ny angano an'ny voaheloka, mpisava lalana, mpitrandraka ala, mpitrandraka harena ankibon'ny tany ary, mpikatroka tontolo iainana vao haingana.
Misongadina ny toetrany, ny gastronomia ary ny divay tsy misy simika, miaraka amin'ireo tanàna kely misy rivotra madio. Ny morontsiraka andrefana any Tasmania dia tsara ho an'ny fialantsasatra fitsangatsanganana, midina ny riandrano amin'ny Renirano Franklin. Tiako ny hevitry ny lamasinina manan-tantara avy any Queenstown.
Toerana inona no ilazanao hitsangatsangana any Aostralia? Azonao ampiana bebe kokoa ve ireo izay notononinay? Avelao aminay ny zavatra niainanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Fizahan-tany any Aostralia
naomi dia hoy izy:
Io no zavatra tsara indrindra nandeha tany Aostralia, tiako be io.
Mamaly an'i noemi
Rosiana nentim-paharazana mozika sy akanjo mahazatra Rosiana
Fampahalalana momba an'i Kiobà